Godaannisa Sirna nafxenyaa maatii kiyyarrattin ilaalaa guddadhe - Oromia Media Network
” Himannoon ittiin yakkame,
1ffaa. ‘Sabaa fi Saba walitti buusuu’ kan jedhu yoo ta’u, inni 2ffaa ammoo, ‘Ummata Mootummaarratti kakaasuu’ akkasumas himannoon 3ffaa, ‘Ummata Oromoo Saba Amaaraa irratt fi Hordoftoota Amantaa Ortodoksiirratti kakaasuu, 4ffaan, ‘Nafxanyaan nu hin bitu Ummata Oromoo kan fixaa ture Nafxanyaa jettee jirta’ kan jedhu dabalataanis, himannaan 5ffaa ‘Ayyaana ummataa Oromiyaa keessatti kabajaman irratti Alaabaan Mootummaa Federaalaa qabatamee akka hin baane kan qabaturratti tarkaanfiin haa fudhatamu jettee dammaqsitee jirta’ jechuun kan narratti banamedha.
“Jireenya koo keessatti yeroon himatamuu fi jecha Amantaa/Waakkii yeroon kennu kuni kan jalqabaati. Biyyoota akka keenyaa dimokiraatawaa hin taane keessatti sirna dimokraatawaa ijaaruuf murannoon hanga hin kaanetti kuni kan dhumaa ta’a jedhee hin amanu. Sobaan himatamuu fi hidhamuun kan raawwatu daandiin siyaasaa haala tarkaanfii isaa yoo sirreesseedha. Kuni yoo hin taane siyaasa boodatti hafaa shiraa fi hammeenyaan guutame kana keessatti yeroo mara lammiileen qulqulluun saaxilamoo akka ta’anii fi miidhamaan akka miidhaatti, miidhaan immoo akka miidhamaatti laalamuun kan itti fufuu dha. Eeyyee aniis har’a dhaddacha kanarra na dhaabuu kan danda’e siyaasa hammeenyaa fi shiraa kan barootaaf ummata kiyyaa fi abboota qabsaa’ota keenya nyaachaa ture kana dura dhaabbachuufi sirreessuuf qooda koon ba’adha jedhee gara addunyaa siyaasaa kanatti waaniin makameefi. Kanaaf himatamuu fi hidhamuu kiyyatti hin rifanne.
Kan biraa, bu’urumarraa ergan gara biyyaa deebi’es wanti anarratti odeeffamaa ture isa ibsameen faallaa ture. Fakkeenyaf:
Saboota gidduutti nageenyi akka bu’u hanga Gaambeellaatti deemuun ummata Gaambeellaa fi Oromoo jiddutti qunnamtiin nagayaa akka jiraatu bakka bu’oota saba lamaanii waliin marii bu’aa qabeessa ta’e goonee jirra. Akkasumas wal dhibdeen Affaar fi Oromoota Walloo jidduu yeroo san ture nagayaan akka hiikamu yaalii godhame keessatti waamichi gama lameen irraa naaf taasifameen qaaman Magaalaa Baatee’tti argamuun gumaacha gama kootii taasiseera. Dabalataanis ummata Oromoo fi Soomaalee jidduutti walitti bu’iinsa sababa daangaatiin uumameen koonfaransii nageenyaa hoggansi naannoolee lameenii yaaman irratti waamichi naaf godhamee argamuun dirqama koo ba’achuuf yaaleen jira. Haaluma wal fakkaatuun waltajjii marii Oroomaaraa Ambotti godhame irratti afeerraa Pirezdantii Naannoo Oromiyaatiin argamuudhaan qunnamtii saboota lameenii bu’ura jabaa irra gad dhaabuuf yaalii taasifame tumseen jira.
“Gara himannaawwan birootti yoon ce’u, Oromoo amantaa Orotoodoksii irratti akkasumas mootummaa irratti kakaaftee jirta kan jedhu haa ilaalluu. Ani bu’urumarraa Amantaan kan dhuunfaati jedhee waaniin amanuuf namni kamuu sababa Amantaa hordofuutiin nama biraatiin walitti bu’uun hiikaa kan qabu natti hin fakkaatu. Yeroon dhaladhu maatii hordofaa amantaa Ortoodoksii ta’een of arge. Haadhaa fi abbaan koo firoonni kiyya martuu har’as hordoftoota amantaa kanaati. Afaan Amaaraa amma dhaddacha kana irratti dubbadhu kan na barsiiste Bataskaana tana. Hordoftoota Amantaa Orotoodoksii irratti haleellaan akka ga’u yoon kakaase kiilomeetira 600 imaltee dhuftee dhaddacha kana irratti hirmaachaa kan jirtu harmee koo irratti akka du’a murteessuu ta’a. Isheeniis ilma ishee, ajjeesaa ishee laaluuf iddoo kanatti argamuun isiin hin malle ture. Abbaa kiyyaa fi obboleeyyan kiyyaas akkasuma.
Ummata Mootummaa irratti kakaaftee jirta kan jedhu sadarkaalee lamatti qoodeetiin laala. Gara biyyaa akkaan deebi’een yeroo jijjiiramaa gara jalqaba qacalee sanatti ummanni hoggantoota jijjiiramaa aangoo mootummaa irra jiran akka deeggaru bal’inaan kakaasuu kiyyaaf akka miseensa paartii isaanii godhamee ilaalameen jira. Haalonni jijjiiramaa, Sabboontonni Oromoo hidhamaa, ajjeefamaa ajjeechaan baay’achaa yeroo dhufu baaburri jijjiiramaa hadiida gad dhiisee qabsaa’ota jijjiiramaa dhiibuu yeroo jalqabu angaa’ota ol’aanotti qaamaan dhiyaachuun gorsa kennuun boodas qeeqa dhiyeessuun akka sirraa’an hanga humna kootii ergaan yaale booda namni gurra kennee dhagahu akka hin jirre wayitan hubadhu gara mormii ifaatti seenuuf dirqameen jira.
“Anaaf Sirna Nafxanyaa jechuun, akaakayyuu abbaa koo, Obbo Adaanaa Taayyee, kan ta’e Obbo Dhaanaa Roobaa Gunjoo, lafaafi maatii isaa irraa nafxiidhaan (qawweedhaan) Tuulamaa’rraa buqqisee gara Gujiitti kan godaansise; Maatii haadha haadha tiyyaa (akkoo tiyyaa) Salaale (Kaaba Shawaa) Aanaa Darraa’tti maatii isaanii fixee bifuma walfakkaatuun gara Booranaatti kan godaansise; akaakilee abbaa haadha kootii Obbo Gaayoo Kumsaa Maccaa Shaggar Kibba Lixaa (Shawaa Kibba Lixaa) irraa buqqisiisee gara Booranaatti kan godaansise sirna hamaa ta’uutti beekna. Ani birkii buqqaatotaafi godaantota kana irraa argamedha. Eeyyeen Ummata Oromoo irratti daguuggii sanyummaa kan raawwate sirna Nafxanyaa kanadha. Sirni kun deebihee akka hin dhufne ijibbaata akkan falmu sababa gahaa kan naaf tahe isa kana.
Silaa!, Sirni nama nyaataan kun akka deebihuuf [ani Nafxanyaa dha ofiin jedhee] kan wirriiqu moo, sirni gabroofataan kun irra deebiin akka hin kaane isa falmatutu yakkamaa tahuu qaba? Yericha Nafxanyaan Oromoota Tuulamaa qe’ee abbaa isaanii irraa godaansise sanatti, harka diriirsee simatee, qubsuma fi gaachana taheefii ani siif jira kan jedheen, Oromoo Booranaa, Gujii, Arsii, Baalee fi Ituu-Humbana (Harargee) oolmaan isaanii jecha koon gatiinsaa bahuu baatullee, dhaddacha kana irra ijaajjee galata isaanii Rabbi haa baasuuf osoo hin jedhin darbuun natti ulfaata.
Goota keenya Haacaaluu, isa nu jalaa ajjeesanii awwaalcha isaa akka hin deemne, boo’icharratti akka hin argamne shiraa fi sharriidhaan dhorkamne.
Eeyyeen, Waahillan koo waliin awwaalchaafi gaggeessaa Goota kanaa osoon deemuu, gadda Haacaaluu irraa jumlaan karaatti ukkaamsamnee ani fi waahiloonni koo hidhamne malee yakkan raawwadhe hin qabu.
Galatoomaa!” Jechuun himannoo isatti banameef, jecha waakkii kennuun yaadasaa goolabe.
Odeessaalee Har’aa (Ebla 1, 2021)
Obbo Battee Urgeessaa itti gaafatamaa Qunnamti Adda Biliisummaa Oromoo kan ta’an, har’a waaree booda waajjira…